Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Vaiti - Phcoker
SKU: 135463-81-9 Category: Smart Drug
Raw Coluracetam powder (135463-81-9) video
Raw Coluracetam powder (MKC-231) inogadzira racetam zvinodhaka zvinonzi inonzi nootropic. Haina hukuru hwehupupuri hunotsvakurudza, asi nzira dzekuita (pamwewo nekugadzirisa) dzinoita se dzakasiyana zvikuru nedzimwe marcetam mazana akaita sePiracetam kana Aniracetam.
Raw Coluracetam powder inoratidzika kuwirirana nehutano hunozivikanwa sehukama hwepamusoro hwecholine hutsva (HACU kwenguva pfupi), iyo ndiyo danho rekugadzirisa-kukonzera kukonzera choline mu neuron kuti iende neurotransmitter acetylcholine. Kuwedzerwa kwehuwandu hweHACU kunoonekwa kuwedzera basa re cholinergic neurons, saka icho chinoda chinangwa chekugadzirisa pfungwa.
Product Name Raw Coluracetam powder
Kemikari Name N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Kirasi yeMishonga Kwete deta yekuwanikwa
Misa chaiye 341.174 g / mol
Skukodzera Kwete deta yekuwanikwa
Coluracetam APane Raw Coluracetam powder (MKC-231) inogadzira racetam zvinodhaka zvinonzi inonzi nootropic.
Raw Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Tsanangudzo
Coluracetam (MKC-231) inogadzira racetam zvinodhaka zvinonzi inonzi neotropic compound. Zvidzidzo zvinoratidza kuti inogona kukurudzira cognition nekuyeuka, uye vashandi vanotaura kuti inowedzera kukanganisa, kutarisa, uye kuratidzwa.
Coluracetam powder inonyanya kushandiswa secholine inokurudzira enhancer iyo inosanganisa hutano hunoita basa.Iyo inonyanya kusimbisa hukama hwepamusoro-soro choline, kuwedzera mazinga eurotransmitter acetylcholine nokupa zvakawanda zvekwenyine kubva kwazviri. Sezvo acetylcholine inonzi neurotransmitter inonyanyobatanidzwa neyekuyeuka uye kugona, inofungidzirwa kuti basa iri ndiyo inonyanya kukosha ya nootropic mano.
Coluracetam inonyanya kuwanda uye inoda dose duku kudarika mamwe racetam class nootropics. Inokurumidza-kuita, inosvika pakakwirira mu plasma mukati me30 maminitsi ekudya, asi mukati maawa matatu mazinga ari kuderera.
Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Mitiro weAtambo
Coluracetam inowedzera hukama hwepamusoro-soro (HACU) (HACU), iyo inhanho-kuderedza-danho reacetylcholine (ACh) synthesis. Zvidzidzo zvakaratidza coluracetam powder kunatsiridza kupererwa kwekudzidza pane imwe muromo wemuromo wakapiwa makonzo akave akaratidzwa necholinergic neurotoxins. Zvimwe zvidzidzo zvakaratidza kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenguva yakareba zvinogadziriswa mumakonzo echolinergic neurotoxin-kurapwa nekushandura choline transporter mitemo.
Benefits weRaw Coluracetam powder (135463-81-9)
Coluracetam inogona kuvandudza chiyeuchidzo uye ruzivo rwekudzidza
Coluracetam inogona kubatsira mukurapwa kwezvinodhaka kusinganzwisisiki
Coluracetam inogona kuderedza kuzvidya mwoyo uye kuzvidya mwoyo
Coluracetam inogona kutsigira neurogenesis (kukura kwemasero emagetsi)
Coluracetam inogona kubatsira kurapa schizophrenia
Coluracetam inogona kuvandudza meso ako
Yakakurudzirwa Raw Coluracetam powder (135463-81-9) Dosage
Zvizhinji zvekutsvakurudza pamusoro pekoruracetam zvakaitwa pamhuka panzvimbo pevanhu, saka hapana mazano anogamuchirwa munyika yose. Iko inoshandiswa dheji yakatarisa inowanzotsanangurwa se 5-20 mg. Vashandi veColuracetam vakarondedzera maitiro akawanda akasiyana-siyana anotungamirirwa nomuromo uye zvinyorwa.
Mhinduro yevashandi yakataura zvakare kuti kushivirira ku coluracetam powder kunogona kukurumidza kukurumidza. Sezvo nemishonga yose, kunyanya nootropic, zvakanakisa kutanga pamadhani maduku uye kuwedzera muroti zvishoma nezvishoma apo muviri wako unopindura uye unogadzirisa kumishonga. Coluracetam haisi yakasviba uye inonzi inobvumirwa zvakanaka uye yakachengeteka.
Zvikanganiso of Coluracetam powder (135463-81-9)
Coluracetam powder haisi chepfu. Saka inofungidzirwa zvakanaka-inoregererwa uye yakachengeteka.
Zvinokanganisa hazviwanzove asi zvinogona kusanganisira kushungurudzika, kuneta, kuora musoro, kutya uye kuora mwoyo. Zvakare, migumisiro yemigumisiro kazhinji inokonzerwa nekusawaniswa kwepamusoro kweeodotropic.
Vakawanda venguva yekutanga vashandisi veColuracetam mushumo kuneta kunowanzova mugumisiro wekutanga nepamusoro wepamusoro.